Sinnaandarrada tacliinta la soo gudboonaata ardeyda qaarkood - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sinnaandarrada tacliinta la soo gudboonaata ardeyda qaarkood
La daabacay tisdag 21 januari 2014 kl 15.37
Qaar badan ee ka mid ah degmooyinka ey ku yaalaan iskuullada ey ku badan yihiin dhallaanka asal ahaan ka soo jeeda dalka dibaddiisa ayaan dhaqaale ku haboon ku hagin iskuullada ey ku sugan yihiin dhallaanka baahiyada ballaaran qaba, sida ay sheegtay hayadda wararka ee TT oo ka soo xigatay baaritaan ay hayadda kor-meerka iskuulladu ku sameeysay soddomeeyo degmo. Qeeybinta miisaaniyadda iskuullada ayaan sidaa u kala weyneeyn, middaasina oo aan saameeyn sidaa u ballaaran soo kordhin.
Halka dhanka kale ay hayadda kor-meerka iskuulladu baaritaankeeda ku ogaatey iskuullada qaarkood ee degmooyinka Uppsala iyo Landskrona oo si toos ah miisaaniyad ugu beegey iskuullada baahida ballaaran u qaba laga guul gaarey.
Xeerka iskuullada ee dalka ayaa oranaya in tacliintu noqoto mid cadaaladda ku saleey-san oo si isku mid ah loo helo, middaasina oo macnaheedu tahay in dhallaan walba sida ku habboon ee baahidiisa kifaaleeynaysa uu xaq ugu leeyahay inuu tacliin u helo. Iyada oo aan loo aaba-yeeleyn tacliintiisii hore iyo iskuulka uu soo dhigtay ardeygu.